Ungaziphatha Kanjani Izipikha Zakho Zasesidlangalaleni | Martech Zone
Uziphatha Kanjani Izikhulumi Zakho Zasobala
NgoLwesithathu, Okthoba 10, 2018 NgoLwesithathu, Okthoba 10, 2018 Douglas Karr
Lesi yiposi obekufanele ngabe ngilibhalile esikhathini esingaphezu konyaka esedlule, kepha bengikhuthazekile ukukubhala kulobubusuku ngemuva komcimbi engikhulume ngawo. Ngonyaka odlule, ngaphuma ngaya eRapid City, eSouth Dakota ngakhuluma khona Umqondo OWODWA, umcimbi wokuqala wokumaketha ibhizinisi osungulwe nguKorena Keys, usomabhizinisi wesifunda, umnikazi we-ejensi, futhi bayaziqhenya ngeNingizimu South Dakotan. Inhloso kaKorena kwakuwukuletha izikhulumi eziqeqeshiwe ezivela esifundazweni ezingashiya umbono kumabhizinisi aseNingizimu Dakota ukuze zikhuthazwe ukwamukela amasu okuthengisa edijithali namasu wokumaketha.
Lapho ngifika eRapid City ngonyaka odlule, uKorena wangilanda esikhumulweni sezindiza uqobo. Ngibheke ehhotela lasendaweni, elinomlando, uKorena wabe esekhipha zonke izipikha ukuyobuka izindawo ezithile zewayini zasendaweni. Ngakusasa, savakasha ngobungcweti esifundeni saseBlack Hills, epaki lendawo yebhere, eMount Rushmore, nakusihlwa e-Deadwood. Ngangishaywa umoya wokungenisa izihambi, kangangokuthi ngatshela uKorena ukuthi ngifuna ukubuya. UKorena ngomusa wangibuyisa kulo nyaka, eSioux Falls. Ukwelashwa bekuhlukile - ukuvakasha okungokomlando esifundeni kanye nezinye izinkumbulo ezinhle. Leso isithombe sethu eMpophomeni eSioux City.
Sonke isikhathi ngangiseNingizimu Dakota kulolu hambo kokubili, ngabelana ngezinkumbulo ezithile online. Angikaze ngibone ukuthi lesi sifunda besimangalisa kanjani futhi sengibuyile kanye futhi ngihlela ukubuya maduze ngeholide elide lapho (iSioux Falls inemizila emikhulu yebhayisikili ehlanganisa idolobha).
Lokhu okuthunyelwe akukona okonakalisa izipikha zakho (noma kunjalo angikhonondi ngokonakala). Sengikhulume emakhulwini emicimbi, angikaze ngihlatshwe umxhwele kakhulu kunalokho ebenginakho ngalezi zingxoxo… nayi eminye imibono:
Angikaze ngichithe isikhathi esiningi kangaka ukulungiselela isethulo nenkulumo kunalokho enginakho ngomcimbi walo nyaka. Bengifuna ukweqa ngokuphelele izindleko nezinsizakusebenza ezichithwe iqembu likaKorena kimi ukuhamba nokukhuluma emcimbini wabo. Angiqiniseki ukuthi lokho kungenzeka, kepha ngazama!
Angikaze ngichithe isikhathi esiningi kangaka ukugqugquzela umcimbi ebengikhuluma kuwo. Yize ngingahlali noma ngisebenza eNingizimu Dakota, ngaphoqa kanzima ngangokunokwenzeka ukuzama ukusiza ukuthengiswa kwamathikithi nokudweba amabhizinisi abo ezifunda kulo mcimbi.
The umkhakha wezokuvakasha nowokungenisa izihambi eSouth Dakota kufanele aqaphele ukuthi uKorena uyinxusa laseNingizimu Dakota elinjani. IKorena ibinabathonya abasuka eBoulder, eColorado kuya eTampa, eFlorida nakuyo yonke indawo phakathi kwalokhu okwabiwe inqwaba yokuhlangenwe nakho kwabo ku-inthanethi nezithameli zabo. Nganginabangani abangaphansi kweshumi nambili abafinyelela kimi bangitshela ukuthi bahlela ukuvakashela isifunda ngemuva kokubona ukuthi ngikujabulele kangakanani ukuhamba.
Yize zonke lezi zinto zihlaba umxhwele, ngicabanga ukuthi konke kubilise entweni eyodwa… UKorena usiphathe njengathi abalingani kunokuba nje izikhulumi. Isikhathi esiningi, ngiyamenywa ukuthi ngikhulume emcimbini futhi ngenziwa ngizwe sengathi abantu bangenzela umusa ngokunginikeza izethameli. Abacabangi ngeminyaka yokukhuluma namasonto omsebenzi angena ekukhulumeni emcimbini wabo noma ubunzima bokushiya ibhizinisi lami nomndeni wami izinsuku ezimbalwa. Impela, kwesinye isikhathi kuba nesidlo sakusihlwa sesipikha noma isibabuli esilinde egumbini lehhotela… kepha akuvamile ukuthola lutho olwengeziwe.
Njengoba sengike ngaya futhi ngakhuluma emicimbini eminingi kangaka, nginokuqonda okuthile kokuthi izinkampani zihlela futhi zithuthukise kanjani imicimbi. Eminyakeni edlule, ngangihlosile emcimbini we-International Analytics futhi iqembu langinikeza umsizi nendawo yangasese yokuxoxisana nabaxhasi babo bebhulogi yami. Ithimba likaKorena likuthathile lokho kulo nyaka futhi ngikwazile ukuqopha i-podcast ngesinye sezipikha.
Nami ngiya khona I-CONEX eToronto kulo nyaka, umcimbi oxhaswe ngu Uberflip kodwa iqhutshwa yi-ejensi kaJay Baer, Kholisa futhi uguqule. Umcimbi uyaqhubeka nokukhula futhi ungomunye wokuhamba phambili engake ngaya kuwo. Angikholwa ukuthi kuqondane nokuthi esinye sezikhulumi ezihamba phambili embonini sisize ukuthuthukisa omunye wemicimbi ephambili embonini. Ngicabanga ukuthi iqembu likaJay lithathe konke okufundwe ezinkulumweni eziyizinkulungwane namakhulu emicimbi - futhi lakusonga ngomcimbi olikhiphela ngaphandle kwepaki. Lapho ngixoxa noJay ngemuva kwengxoxo yakamuva, ngacabanga ukuthi ngibone ithuba elilodwa futhi ngamtshela ngalo. Impendulo yakhe yayimangalisa - wayezibophezele ngokugcwele futhi wabuza imibuzo embalwa. Ngiyathanda ukuthi ulalele izethameli zakhe.
Ungasiphathi Kanjani Isikhulumi Sakho
Shesha phambili ethubeni lami lokukhuluma lakamuva. Ukulungela umcimbi bekungekuhle kangako futhi nezinsizakusebenza zokukhuluma lapho bezinzima impela - kusuka esiteji, ubuchwepheshe obusekelayo, kuya ku-ajenda. Bengingazizwa sengathi ngishaye i-homerun ngenkulumo yami, ngakho-ke ngithathe umhleli eceleni ngemuva komcimbi futhi ngenza izincomo zokuthi isipikha sizwa kanjani izikhwepha kuthuthukiswe. Impendulo yethusa kancane… wangitshela ukuthi ngingaqhuba umcimbi wami ngaleyo ndlela uma ngifuna.
Bengingazami ukutshela umhleli ukuthi bakwenza kanjani kufanele Qalisa umcimbi, ngibe nesipiliyoni esanele ngemuva kokukhuluma yonke le minyaka ukuthi yini engayithuthukisa. Uma kungenamandla njengoba kungenzeka futhi kungabi nzuzo njengoba kungaba, kungani ungalaleli izikhulumi zakho ukuthola ukuqonda nemibono ngalokho ongakuhlola ngokuzayo?
Izipikha Ngabalingani Bakho
Uma ungiqasha ukuba ngikhulume emcimbini wakho, kungithakasela ukuthi ungagcini ngokwenza umsebenzi omuhle wokukhuluma… kungisifiso sami sokukhuthaza umcimbi wakho ngaphambi, ngesikhathi nangemva kwawo. Nginentshisekelo enkulu yokuthuthukisa isipiliyoni somcimbi wakho kepha ngikwazi. Kuyintando yami ukukusiza ukhulise umcimbi wakho ukuze ukwazi ukubuyisa mina. Ngiyabonga futhi ngikweleta izinkampani ezingiqashile. Ngiphathe njengozakwethu futhi ngizokunikeza konke enginakho ukuthuthukisa umcimbi wakho. Ngiphathe njenge-crap futhi ngiphumile lapho.
Uma unentshisekelo yokuba nobambiswano nami emcimbini wakho olandelayo, qiniseka ukuthi ungithinta nge DK New Media noma i-chat bot lapha kusayithi lami.
Tags: umqondo owodwaconexumcimbiJay BaerI-keynotekorena okhiyeingqungquthela yezokumakethaIzingqungquthela Zokumakethaukukhuluma esidlangalaleniidolobha elisheshayoi-sioux iyawaisikhulumiizikhulumitoronto